ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software]
1 ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 23rd October 2009, 7:39 pm
ကျွန်တော်တော့မစမ်းရသေးဘူးနော် ဟီး မှားရင်လည်းမင်မင်တွေရွေ့ပေးပါ
Proxy Grabber & Checker
-Google Leecher for ProxyJudge
-Speed test for proxyjudges
-WHOIS option for the proxy IP...........etc
Size:	1229 KB
A text file tool. support most comman logs. you can extract username and password from them
Size:	1214 KB
If you you haveasite and onlyafew combos for that site it buildsacomplete and large combolist for you.
It scans at first for all lines containing these combos and then extracts all combos fom the sites, that contain these combos, too.
Size:	1140 KB
A tool that searches your wordlists to find combos matching given usernames. For example you can often find list of users on some forums and according to that you can easily build thematic wordlists
Size:	1191 KB
2 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 17th November 2009, 3:17 pm
အကို ညီက ကိုယ်တိုင်ဆော့ဝဲလ်လေးတွေ။ဒါမှမဟုတ် trail version တွေကို ဆြွဲ့ပီးသုံးပါတယ်..အခု အကိုရေ..ညီက ကိုယ်တိုင် crack လုပ်ပြီးဆော့ဝဲလ်တွေကို..သုံးချင်ါပတယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို..လွယ်တဲ့နည်းလေးနဲ့ ရှင်းတဲ့ နည်းလေးရှိရင် သင်ပေးပါဦး..အကို..ညီသုံးချင်လို့ပါ..programming language တော့သိပ်နားမလည်ပါဘူး..တစ်လုံးမှကိုမသိတာပါ..ကူညီစေချင်ပါတယ်အကို..
3 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 17th November 2009, 5:45 pm
ကျွန်တော်ကအခု Creacking ပိုင်းကိုရပ်ထားပါတယ် အဲဒါကို ဒီဖိုရမ်တွေထဲမှာ Cracking ပိုင်းရေးတဲ့ဆရာလေးတွေရှိပါတယ်
ပြီးတော့ ebook လည်းရှိတယ် tools တွေလည်းရှိတယ် ဒီဖိုရမ်ထဲမှာပဲ့ ရှာလိုက်နော်ညီ
4 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 17th November 2009, 7:03 pm
Crack လုပ်ပြီးသားဆောဖ့်ဝဲလ်တွေကြီးပဲကို အလကားဒေါလ်းလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော်ပြန်ရှာကြည့်ပေးပါ့မယ်။
5 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 19th November 2009, 3:44 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 43
တညျနရော : ထိုင်းနိုင်ငံ
udku wrote: အကို ညီက ကိုယ်တိုင်ဆော့ဝဲလ်လေးတွေ။ဒါမှမဟုတ် trail version တွေကို ဆြွဲ့ပီးသုံးပါတယ်..အခု အကိုရေ..ညီက ကိုယ်တိုင် crack လုပ်ပြီးဆော့ဝဲလ်တွေကို..သုံးချင်ါပတယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို..လွယ်တဲ့နည်းလေးနဲ့ ရှင်းတဲ့ နည်းလေးရှိရင် သင်ပေးပါဦး..အကို..ညီသုံးချင်လို့ပါ..programming language တော့သိပ်နားမလည်ပါဘူး..တစ်လုံးမှကိုမသိတာပါ..ကူညီစေချင်ပါတယ်အကို..
အစ်ကို ရေ အစ်ကို လိုချင်တဲ့ Crack တွေ ကို အောက်က ဆိုဒ်လေး မှာ အလွယ်တကူ ရှာယူပီး ဒေါင်းလော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်..... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 19th November 2009, 6:44 pm
7 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 19th November 2009, 7:04 pm
udku wrote: ဟုတ်အခုလှိုရယ်ပေးလိုက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့ရေ..ညီက အသစ်ဆိုတော့မှားတာရှိရင်ပြောပါအုန်းနော်..
ကိုယ်တိုင် Crack လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အားပေးပါတယ်။ လုပ်ပါ။ ကျနော်တို့လည်း လေ့လာနေတာပါ။ တူတူလေ့လာကြတာပေါ့။
ကျနော်တို့ကတော့ ဘီဂင်နာလေးတွေပါ။ ကို rhythm ကတော့ ဆရာကြီး။
ကျနော်တို့ရေးတာလေးတွေနဲ့ ကို rhythm ရဲ့ စာအုပ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အစ်ကို့အနေနဲ့ ခရက်လုပ်နိုင်မှာပါ. အကုန်တော့ရဘူးနော်။ တချို့တ၀က်ဘဲ။ Only 10 % ကျန်တဲ့ 90 % က ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ။
8 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 21st November 2009, 11:45 am
ကို rhythm ကတော့ ဆရာကြီး။
ကျနော်တို့ရေးတာလေးတွေနဲ့ ကို rhythm ရဲ့ စာအုပ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အစ်ကို့အနေနဲ့ ခရက်လုပ်နိုင်မှာပါ.
နောက်ကျရင် ဒီလိုအရေးအသားမျိုးတွေ ထည့်မရေးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဒီလိူ ကျွန်တော့်နာမည်တွေ ထည့်ထည့်ရေးတော့ အခြား cracker တွေကို မျက်နှာပူပါတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ ကျူတိုရီရယ်တွေ ရေးပေးဖို့တောင် လက်တွန့်နိုင်ပါတယ်။
9 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 3rd December 2009, 6:51 pm
အကို နည်းပညာတွေက free ပါ..အခုလိုဝေမျှပေးတာကိုက ၀မ်းသာလှပ်ါတယ်အကို..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
10 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 8th April 2010, 6:54 pm
တညျနရော : now (yangon)
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-06
အစ်ကိုတော့ ပြောကြတဲ့ rhythm စာအုပ်က မြန်မာလိုလား အီး လို လား
မြန်မာလို ရေးတာဆိုရင် လေ့လာလလို့ လွယ်တာပေါ့
11 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 8th April 2010, 7:00 pm
မြန်မာလိုပါ ဒီဖိုရမ်ထဲမှာရှိပါတယ် ebooks ထဲမှာပါ
12 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software] on 8th October 2011, 6:59 pm
ko rhythm cracker guide v 2.1 full version မထွက်သေးဘူးလားခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တောင် v2.1 ကို print ထုတ်ပြီး လေ့လာနေတာ။ full version ထွက်ရင်လက်တို့ပါဦးခင်ဗျ။
13 Re: ကျွန်တော်၏ Cracking Tools [Cracking Software]